Archives Good — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Buuga soo baxa October 1, laakiin waxa aad kala soo bixi kartaa cutubka muunad ah TheGoodLifeTheBook.com, oo waxaad ka hor-si kara kitaabka halkan.
sii daayo The buug on October 1, laakiin waxaad pre-si karo hadda halkan.
Sida badan ee aad ogtahay, Waxaan ka shaqeeya kitaab si ay u tagaan oo ay la socdaan aan album cusub, Life The Good. Well kitaabkan la sii daayo doonaa Moody daabacday on October 1, 2012. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan war-saxaafadeed hoos ku. Oo waxaad tagtaa TheGoodLifeTheBook.com in lagu wargeliyo marka ay soo bandhigtay.
Sinta TRIP ARTIST HOP LEE sii daayo BOOK ugu horeeyay NOLOSHA wanaagsan ON OCTOBER 1, 2012 ILAA Moody daabacayaasha
mashruuca soo socda ku dhisan in la sii daayo album hadda iyo qeexaa "The Life Good" by adag dadka si aanay u sii noolaan iftiinka been laakiin koraan on safar cusub oo ka ammaan.
Los Angeles, Message. (Laga yaabaa 17, 2012) -Billboard Hip hop Trip artist chart-sareesa Lee ayaa isu diyaarinaya in uu buugga ugu horeysay ee loo sii daayo, Life The Good (Moody Publishers). sii A uu album ugu dambeeyay taas oo sii daayay April 10, 2012 iyada oo Records Reach, Life The Good ku dhufan doono dukaamada dalka oo on October 1, 2012.
"Sanado, Waxaan samaynaya music adag views our dunida oo dhibcood si ay Masiixa – laakiin waxaa mar walba waa ay ka liidato si music, maxaa yeelay, waxaa jira oo kaliya si aad aad ula xiriiri karaa song a,"Ayaa sheegay in Trip. "The…
The safar Life Good furmay Isbuucaan! Ogow oo taariikhda noqon doonaa kuugu dhow. Waxaan noqon doonaa in Minneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, iyo Dallas. Taariikhaha More waxaa lagu dari doonaa dhakhsaha badan si fiican u! Riix links ee tigidhada ama tag ReachRecords.com/events.
My album Solo afaraad, "The Life Good” ayaa si rasmi ah la sii daayay! Iibso album ka iTunes halkan. Waxa kale oo aad ka qaadan kartaa album ee dukaamada ugu Lifeway, Family Christian, Mardel, iyo Target & Wal-Mart (dukaamada xulo).
Sidoo kale, waxaad daawan kartaa video cusub ee "Waxaan ahay Good” muuqan Lecrae halkan. Waxaan iskaashi la Voice of shahiid ah on this mid si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan cadaadis iyo ku dhiirri geliyo rumaystayaasha si adag taagan.
ii soo biir ku tukanayay in Rabbigu isticmaali lahaa mashruucan si ay uga hortagaan iyo dhiiri badan!
Diiwaan Shirka Up Man ee halkan iyo in ka badan oo ku saabsan my album bartaan “Life The Good” halkan
Waayo, qeybtii hore ee 2011, songs ma aan sameeyey, Tilmaamo lahayn, shows lahayn, waxba ma. Waxaan u dhaqaaqay Washington DC oo qaaday ku saabsan 5 bilood off for internship a-dhaqatada. Inkasta oo la ii ma safraya dunida oo hor taagan badda ka mid ah dadka habeen kasta, waxa uu ahaa mid ka mid ah xilli ciyaareedyadii ugu badan dhala oo noloshayda. Marka internship ku dhamaatay Waxaan bilaabay mar kale u safraya oo si tartiib ah u shaqeeyo on music cusub bilaabay. Qiyaastii dhici waxaan bilowday inay jaanta buuxa shaqeeya on my album Solo afaraad. Oo markii bilood oo howl adag, album la badan sameeyey.
Waxaan xitaa ma muujin karaan sida ugu faraxsanahay inaan u sii daayo. Waxaan mar walba u eegay dadka siin wax ma waxaan iyaga u siiyey ka hor. Ma doonayo inaan in remake album ah waxaan hore u sameeyey. Waxaan doonayaa in aan idin siiyo album cusub, iyadoo music cusub, iyo siyaabo cusub oo u dabaal runta isku jir ah.
In 2006 on my album ugu horeeyay, Hadday ogyihiin, Waxaan doonayay inaan dadka ku saabsan Ilaah ammaan badan oo aan rabay inay ogaadaan sheeg. In 2008, "20/20″ ka soo baxay oo waxaan doonayay inaan ku dhiiri dadka waawayn si ay u arkaan Rabbiga la aragtida dhabta ah. 2 sano ka dib, "Intii u dhaxaysay laba…